Kooxaha Arsenal iyo Manchester City oo ku dagaalamaya Jonny Evans | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kooxaha Arsenal iyo Manchester City oo ku dagaalamaya Jonny Evans
Kooxaha Arsenal iyo Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay doonayaan inay dib u cusbooneysiiyaan xiisaha ay u qabeen daafaca kooxda West Bromwich Albion Jonny Evans.
Xilliga xagaagan ayaa waxaa furmaya suuqa kaa iibsiga, labada kooxood ayaa doonaya inay la saxiixdaan xiddiga reer Northern Ireland ka dib markii uu ka caawiyay kooxdiisa uu ka caawiyay inay shabaqa soo taabtaan xilli ciyaareedkan sideedaad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Evans ayaa ugu danbeyn waxaa uu ku jiraa kuwa ugu wanaagsan ee garoonka Hawthorns, waxaana ay qeyb muhim ah ka tahay kooxda Alan Pardew, laakiin sida laga soo xigtay The Sun, Gunners iyo City ayaa diyaar u ah inay dalab ka gudbiyaan bisha Janaayo.
Pardew ayaa diyaar u ah inuu Evans siiyo qandaraas cusub oo mushahar qaai ah, laakiin tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa lagu soo waramayaa inuu rajeynayo inuu 29 jirkaan ku soo qaato Emirates Stadium isagoo dammaanad qaadaya kubada cagta.
Sida laga soo xigtay City ayaa ka walwalsan tartanka kooxaha kae,waxaana Pep Guardiola uu u arkaa Evans inuu bedel u yahay Vincent Kompany, islamarkaana uu ku bilaaban doono xadka u dhexeeya Waqooyi Galbeed, Manchester United ayaa la sheegayaa inuu doonayo inuu ku biiro kooxda hogaanka heysa.
Evans ayaa 18 bilood ka hartay qandaraaskiisa West Brom.